सञ्चारमन्त्रीको जवाफः चोरी डकैती गर्नुभन्दा चौकिदार हुनु राम्रो - PuraKhabar
११ जेठ, काभ्रे । सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई लिएर व्यक्तिगत आक्रमण भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।गृहजिल्ला काभ्रेमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले व्यक्तिगत आक्रमण देखेर अचम्म लागेको बताए ।
हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले दासलाई झै व्यवहार गरेको भन्दै बास्कोटाले बोलेको हुलिया अनुसार नभएको टिप्पणी गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘गोकुल बास्कोटालाई तपाई हामीले चिनेकै छनौं र । अहिले हुलिया हेर्नुस् त ? बोलाई हेर्नुस् त ? गएगुज्रिएको दासलाई भनेको झै पो गर्दै हुनुहुन्छ।’